अझै फेला परिनन आज त्रिशुलीमा जिप खस्दा हराइरहेकी ११ वर्षीया बालिका जेनिसा – AB Sansar
November 26, 2020 santoshLeaveaComment on अझै फेला परिनन आज त्रिशुलीमा जिप खस्दा हराइरहेकी ११ वर्षीया बालिका जेनिसा
काठमाडौं । बिहीबार बिहान त्रिशुलीमा भएको जिप दुर्घटनामा परी हराइरहेकी ११ वर्षीया बालिका जेनिसा रोका अझै फेला परेकी छैनन् ।जेनिसाको सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले खोजी कार्य जारी राखेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयचितवनका प्रवक्ता डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले ।नदीमा डुबेको जिप निकाल्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिँदै बालिकालाई गाडीले च्यापेको हुनसक्ने आशंका गर्नुभएको छ ।‘सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले ।
बालिकाको खोजी गरिरहेको छ । उनको अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन’ डीएसपी थापाले भन्नुभयो, ‘नदीभित्र डुबेको जिपले बालिकालाई च्यापेको छ ।कि भन्ने आशंका छ । जिप निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।’सशस्त्र प्रहरीले यसअघि जिप चालक सूर्य केसी र जमुना रोकाको शब घटनास्थलबाट निकालेको थियो ।
उहाँहरुको शव परीक्षणका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको छ ।अखिल नेपाल युवक संघका उपाध्यक्ष मुकुन्द रोकाको परिवार चढेको लु.१ च. ९७३१ नम्बरको जिप बिहीबार बिहान ५ बजे मुग्लिनदेखि २ किलोमिटर ।कुरिनटारतर्फ त्रिशुलीमा खसेको हो । जिपमा सवार युवक संघका उपाध्यक्ष मुकुन्द रोकाकी श्रीमती जमुना रोका, छोरी जेनिसा र चालक सूर्य केसी ।
बेपत्ता भएकोमा जिसँगै जमुना र चालक केसीको शव फेला परेपनि बालिका हराइरहेकी छन् । उपाध्यक्ष रोका नदीमा पौडेर बाहिर निस्कन सफल हुनुभएको थियो ।उहाँको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । रोकाको अवस्था सामान्य छ । उपाध्यक्ष रोका दम्पती छोरीको ।उपचारका लागि बुधबार राति प्युठानबाट काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यही क्रममा सो दुर्घटना भएको हो ।
कस्तो जमाना आयो: प्रेमिकासंग बस्न पूर्व सांसदको छोराले न’क्क्ली दु’र्घटना गराएर ग’र्भवती श्रीमतीको ज्या’न लिए
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र ९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ?
आज आईतवार फेरि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य
September 5, 2021 Ab-संसार
भाईको जन्मदिन मनाउन रमाउँदै गरेकी चार वर्षीया बालिकालाई चितुवाले खो,स्यो, केही क्ष’णमा नै मृ,त्यु